भोलिको प्रदर्शनको कुनै औचित्य छैनः छवी सापकोटा - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
भोलिको प्रदर्शनको कुनै औचित्य छैनः छवी सापकोटा
प्रकाशित मिति: १७ मंसिर २०७२, बिहीबार
भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा एनआरएनए अस्ट्रेलियाले अस्ट्रेलियाको क्यानवेरास्थित विभिन्न विदेशी कूटनीतिक नियोगलाई दिएको ज्ञापनपत्र र विरोध प्रदर्शनका विषयमा एनआरएनए अस्ट्रेलियाका एक्जुकेटिभ मेम्बर छवी सापकोटासँग असनेपालन्यूजले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:
भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा एनआरएनए अस्ट्रेलियाले आज गरेको प्रदर्शन कस्तो रह्यो?
प्रदर्शन निकै राम्रो रह्यो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई नेपालको समस्याको बारेमा ध्यानकर्षण गराउन सफल भएको छ । हामीले डव्ल्यूटीओको कार्यालयलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । यो सन्देशमूलक मात्र नभएर नेपालले भारतमाथि लगाउँदै आएको नाकाबन्दीका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको ध्यानाकर्षण गराउन उपलब्धिमूलक रहेको हामीलाई लागेको छ ।
कतिजति मानिसहरूको सहभागिता रहेको थियो?
सिड्नीबाट ७०÷८० जनाको सहभागिता रहेको थियो भने मेलबर्न, ब्रिसेवेन र क्यानवेरा गरी २०० जना साथीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
त्यहाँ के गर्नु भयो?
क्यानेवेरामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय नियोग, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू र डव्ल्यूटीओको प्रतिनिधिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं । उनीहरूलाई भारतले नेपाललाई लगाएको नाकाबन्दीको विषयमा ध्यानकर्षण गरायौं । उनीहरूले यूनएनको प्रतिनिधिसम्म यो कुरा पुर्याउने बचन दिएका छन् । यो हाम्रो संविधानको विषय र भारतले नेपालमागि गरेको थिचोमिचोको विषय प्रष्ट्याउने मौका पनि थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई घच्घच्याउन यो कत्तिको पर्याप्त होला?
यो पर्याप्त हुन्छ होइन, यो प्रारम्भ हो । यसले नेपालको समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न निकै सघाऊ पुर्याएको छ ।
अर्को पक्ष तपाईंहरूको पदर्शनको विपक्षमा छ, उनीहरू भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको होइन, नेपालले आफ्नो समस्या समाधान नगरेको हो भनिरहेका छन् यसमा तपाईंलाई के लाग्छ? यसलाई एनआरएनए अस्ट्रेलियाले कसरी लिएको छ?
यो महत्वपूर्ण कुरा हो, हामीले भारतले नाकाबन्दी लगाउनु गलत भनिरहेका छौं भने त्यो सँगै नेपालले आफ्नो घरेलू समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठाइरहेका छौं । मधेसका जायज मागहरू पूरा गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्दछ भन्ने नै एनआरएनए अस्ट्रेलियाको जोड हो । यसमा हाम्रो चिन्ता र चासो दुबै छ । त्यसका लागि हामीले नेपाल सरकारलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं ।
यो विभाजनको अवस्था किन आयो ? एक ले नाकाबन्दी हो भन्ने अर्कोले होइन भन्दा कूटनीतिक नियोगहरूलाई द्विविधा हुँदैन ?
हामीले कूटनीतिक नियोगहरूलाई प्रष्ट पारिरहेका छौं । भोलीको आन्दोलनको औचित्य छैन । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएकोका कुनै शंका छैन । हो नेपालका केही घरेलू समस्या छन् । त्यो समस्या भारतले मिलाइदिने होइन, नेपालले नै मिलाउने हो । त्यसैको आडमा भारतले उपस्थिति देखाउन खोज्नु, नाकाबन्दी गर्नु गलत हो । यो कुरा कूटनीतिक नियोहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् ।
अष्ट्रेलियाको विकास बाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ,समाजसेवि सारदा पौडेल ।
महेश्वर शर्मा सिड्नी,अष्ट्रेलिया समाज बदल्नेहो भने पहिला आफुबाटै शुरु गरौं।हामी जति पनी समाज बदल्ने कुरा […]
युवाहरुको आस्था बन्दैछन् इन्जिनियर कृष्ण भद्र अर्याल
वाल्यकाल देखिनै प्रतिभाशालि ब्यक्तिको रुपमा परीचित इन्जिनियर कृष्ण भद्र अर्याल ले नेपाल इन्जिनियर्स […]